Irabha yaMazwe ngaMazwe kunye neziXhobo eziPhambili kuMboniso wezeMpilo
ngomphathi ku 2020-12-30
Umboniso uza kuhlala iintsuku ezintathu ukusuka nge-10 ukuya kwi-12 ka-Okthobha. Amalungiselelo ethu phambi komboniso: Izinto zokwazisa zenkampani, iikowuti zeemveliso eziqhelekileyo, iisampulu, amakhadi oshishino, kunye noluhlu lwabathengi abaza kuza emnqubeni wabo, ...
Umboniso wama-20 wase-China wamazwe aphesheya kwiTekhnoloji yeRubber uza kuboniswa kangangeentsuku ezintathu ukusuka nge-16 kaSeptemba ukuya kwi-18, 2020. 2020 ngunyaka owodwa entwasahlobo yeminyaka edlulileyo, iinkampani ziya kuthatha inxaxheba kwimiboniso eyahlukeneyo ...
Umboniso we-19 waseTshayina weZizwe ngezizwe kwiTekhnoloji yeRubber uzakuboniswa iintsuku ezintathu ukusuka nge-18 ukuya kwi-20 ngoSeptemba, 2019. Kuwo wonke lo mboniso, sikhuphe iincwadana ezili-100, amakhadi oshishino angama-30, safumana amakhadi oshishino abathengi angama-20 nezinto zokwakha. Kwakukho ...
Inkqubo yokuveliswa kweerabha zerabha zorhwebo
ngomphathi ku 2020-11-10
Isinyathelo sokuqala sokuxuba ukulawula umxholo wesithako ngasinye kunye neqondo lokushisa lokubhaka, ukwenzela ukuba ubunzima kunye nezithako zizinze. Emva kokuxubeka, kuba icolloid isenako ukungcola kwaye ayifani, kufuneka ihluzwe. Ukongeza ekuqinisekiseni ukuba ...
Jinan Power ngerabha mqengqeleki Equipment Co., Ltd. Inkampani yethu Malunga nathi Jinan Power ngerabha mqengqeleki Equipment Co., Ltd.kuyinto umenzi ngobuchule kwezixhobo irabha mqengqeleki mihla ukudibanisa uphando lwezenzululwazi kunye nemveliso. Yasekwa ngonyaka ka-1998, inkampani sisiseko iphambili imveliso spe ...
Ukuphuculwa kwenkqubo yokuveliswa kwerabha yesiko
Kwimveliso yeerabha, i-roller irabha yimveliso ekhethekileyo. Inoluhlu olubanzi lokusetyenziswa, ineemfuno zobugcisa ezahlukeneyo zerabha, kwaye imeko yokusetyenziswa inzima. Ngokumalunga nokulungiswa, iyimveliso eshinyeneyo, kwaye irabha ayinakuba ne pores, ukungcola kunye nokwahlula ...
Amaroli erabha aMashishini
ngomphathi ku 2020-08-08
Amaroli eRabha aRholwayo asetyenziswayo Iiroller roller zisetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo kwaye zifumaneka kwiinkqubo ezininzi zokuvelisa. Ukusetyenziswa okusisiseko kweeroller roller kufumaneka kwiinkqubo zokwenza iimpahla, ifilimu, iphepha, iphepha kunye nentsimbi ebhijelweyo. Ngerabha zigqunyiwe izileyi zisetyenziswa kuzo zonke iintlobo con ...